Apple waxay Kusoo Bandhigeysaa iPad-ka Cusub WWDC 2017 oo leh Faraha yar | Wararka IPhone
Waxay ahayd mid ka mid ah kuwii sida weyn loo sugayay inta lagu gudajiray WWDC-kan ugu dambayntiina waxaa soo ifbaxay: iPad Pro cusub ayaa halkan yaal. Haa, iPad kale, kanna wuxuu ballan qaadayaa inuu isbeddel ku imaan doono sida aad ula macaamilayso iPad-yada yar yar, oo leh shaashad 10,5-inji ah laakiin taasi waxaa lagu dhejiyay shaashad ay isku cabbir yihiin iPad-kii hore ee 9,7-inji ahaa. Ka taxaddar, taasi micnaheedu maahan inay isku mid ka tahay dibadda.
Shaashadda ayaa 20% ka weyn qaababkii hore maxaa yeelay wuxuu arkay looxyadiisii ​​oo yaraaday, wax ku jira isbeddelka waxa aan ku aragno suuqa mobilada beryahan dambe taasna ka dhigaysa kaniiniga Apple mid aad u miidhan ah markii la isticmaalayo oo ka raaxo badan in la isticmaalo. Waxaas oo dhan iyada oo aan cabbirkeeda la kordhin si uun.
IPad Pro ma la yimaado qalin cusub oo Apple ah, laakiin isticmaalka kan ayaa ka fiicnaan doona moodooyinka kale, hoos u dhigida daahitaanka 20 milliseconds. IPad-ku wuxuu la yimaadaa shaashad run ah oo loo yaqaan 'True Tone screen', wax aan horay ugu soo aragnay moodello kale iyo xoogaa horumar ah oo kaamirada ah. Faahfaahinta tani waxay kor u kacaysaa 12 megapixels, marka lagu daro ku darista xasilinta muuqaalka muuqaalka, True Tone afar-LED flash, kala duwanaansho badan oo midab ah iyo fiidiyowga 4K. Hadda kamaradda iPad-ka ayaa u fiican sida iPhone 7.
IPad-yada cusub waxay la imaanayaan 64GB oo keyd ah oo ah awood aasaasi ah waxayna ka bilaabayaan $ 649 qaabka 10,5-inji ah iyo $ 799 oo loogu talagalay qaabka 12,9-inji. Awoodda ugu badan ee labada xaaladood waxay u dhigantaa 512GB xusuusta, oo ah wax ku filnaan doona inta badan adeegsiga la siin karo iPad-ka, si kasta oo ay xirfad u leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » New iPad Pro
Ka socda 9.7 ″ ilaa 10.5 ″ waxay kordhisaa shaashadda 8%, ma ahan 20%
Apple wuxuu siinayaa qallooca xaqiiqda lagu kordhiyay iOS 11
Dukaanka App-ka ayaa gebi ahaanba beddelaya qaabkiisa iOS 11, waa sida ay u egtahay